Stanolone (DHT) budada (521-18-6) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Budada Root Stanolone (DHT) (521-18-6)
Androstanolone waa mid isku mid ah tan DHT. DHT waxaa badanaa lagu sameeyaa baaritaanka, qanjidhada timaha, qanjidhada adrenal iyo qanjirka 'prostate' iyo waxaa la soo saaraa marka testosterone la falgalo enzim ee jirka. Dumarka, DHT waxay kicisaa horumarinta sifooyinka lab ah ee embriyaha iyo uurjiifka.
Qalabka Raw Stanolone (DHT) (521-18-6) video
Qalabka Raw Stanolone (DHT) (521-18-6) Sharaxaad
Daawada Raw Stanolone (DHN) waa maaddo noolol oo hormoon ah oo hormoon ah oo hormoon ah, oo laga sameeyay qanjirka 'prostate', testes, timaha timaha, iyo qanjidhada adrenal by enzyme 5-alpha-reductase iyadoo la adeegsanayo dhimista alfa 4, 5 laba-xidhmo labadaba. Dihydrototestosterone ayaa leh fasalka xeryaha loo yaqaan called androgens, oo sidoo kale loo yaqaan 'hormoonada' hormoonada ama steroids, taas oo ah steroid galmada oo hormoon ah iyo hoormoon. Waa agonist ka mid ah aqbalaha cunnida iyo koritaanka (AR). Waxay ka ciyaaraysaa kaalin muhiim ah oo ku salaysan jinsiga, kobaca guska iyo xoqida, timaha, wax soo saarka sebumaha iyo horumarinta iyo dayactirka qanjidhada qanjirka 'prostate' iyo jeexjeexyada. Waxaa badanaaba loo adeegsadaa daaweynta ragga labka ah ee nafaqadarrada ah, yaraanshaha cudurada daran, iyo yaraanshaha dhalmada iyo gabowdaha yaraanta.
Root Stanolone (DHT) budada (521-18-6) Smamnuucista
Product Name Root Stanolone (DHT) budada
Magaca Kiimikada 5α-androstan-17β-ol-3-one solution,(5-alpha,17-
brand NAme Dihydrotestestoneone, DHT
Fasalka Daroogada Steroids; intermediates & kiimikooyin wacan; Farmashiyaha; Steroid iyo Hormoon; API
Molecular Wsideed 290.44
barafku Psaliid 178-183 ° C
Karkarinta Psaliid 372.52 ° C (qiyaasta adag)
Biological Life-Life saacadood 8-9
SOlubility Biyaha, 525 mg / mL (at 25 ° C)
Stanolone Application Waxaa loo adeegsadaa cudurada joogtada ah, osteoporosis, infekshan daran iyo jahwareer, gubasho, iwm. Sababtoo ah dheelitir la'aanta nitrogen, kor u qaadida koritaanka ilmo dhicis ah ama aan qaan gaarin, iwm. Jabtu ma fududa in la bogsado, hypercholesterolemia iyo postpartum depression ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa . Iyo budada Raw Stanolone waxaa loo isticmaali karaa walxo daawo.
Waa maxay budada Raven Stanolone (DHT) (521-18-6)?
Androstanolone, ama stanolone, oo sidoo kale loo yaqaanno dihydrotestosterone (DHT) oo lagu iibiyo astaanta magaca Andractim ee ka midka ah kuwa kale, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) iyo hoormoonka loo isticmaalo inta badan daaweynta heerarka testosterone ee ragga. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo naasaha iyo guska yar ee ragga. Waxaa caadi ahaan la siiyaa jel for daloolka maqaarka, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida ester by cirbadeynta musqusha.
Sidee budada loo yaqaan "Raw Stanolone (DHT)" (521-18-6) shuqullada
Waxaa lagu sameeyaa ficillada noocan ah 3-oxo-5-alpha-steroid-4-dehydrogenase. Dihydrototestosterone (DHT) waxaa lagu soo saaraa xNUMX alfa ee testosterone. Si ka duwan testosterone, DHT laguma saari karo estradiol sababtaas iyo androstanolone loo aqoonsan yahay sida steroid saafi ah iyo istrogen. Dihidototestosterone (DHT) waa haweenta nafleyda firfircoon ee hormoonta hormoonka, hormarin laga sameeyay qanjirka 'prostate', testes, timaha timaha, iyo qanjidhada adrenal oo ka soo jeeda 5-alpha-reductase iyadoo la yareeyo alfa, 5double bond. Dihydrototestosterone waxaa iska leh buuggan oo kiimiko ah oo loo yaqaan 'androgens', oo sidoo kale loo yaqaan 'hormoonnada' hormoonada ama baaritaanada 'testoids'. DHT waxaa loo maleynayaa inay tahay qiyaastii 5 ka xoog badan yahay testosterone taasoo ka dhalatay xajinimada sii kordheysa ee aqbalaha xayawaanka.
Root Stanolone (DHT) budada (521-18-6)
Stanolone waxaa lagu iibiyaa suuqa xoolaha xoolaha ee wadamada qaarkood oo ka mid ah 20 ama 50 mg / ml. Ragga waa inay qaataan qiyaasta 200-400mg toddobaadkii, waxaana duritaanka loo baahan yahay hal mar toddobaadkii.
Dumarku waxay tijaabin karaan nandrolones sababtoo ah dabeecadahooda khafiifka ah iyo dareenka hooseeya. Si kastaba ha noqotee, waxay weli yihiin kuwo aad u sarreeya, oo markaa aan ka badnayn 50 badhkeed todobaadkii ayaa lagula talinayaa haweenka, iyo haddii dhibaatooyinka fayaqabka ay dhacaan, isticmaalka laurabolin waa in isla markiiba la joojiyaa.
Isticmaalka budada Root Stanolone (DHT) (521-18-6)
Androstanolone waa mid la mid ah dihydrotestosterone oo u gaar ah, sida aynu ognahay, waxaa sameeya isbedelka isdhexgalka ee testosterone. Qaar waxay sidaas darteed wacaan Androstanolone dihydrotestosterone synthetic. Androstanolone wuxuu leeyahay saameyn ku salaysan iyo istrogenic, iyo, sababtoo ah qaabkeeda, looma beddeli karo estrogen. Si kor loogu qaado awoodda korontada iyo maskaxda Androstanolone qiimo yar.
Androstanolone waxaa loo isticmaali jiray steroid tartanka tartanka ciyaaraha fudud ee cayaaraha tan iyo markii uu gacan ka geystay inuu helo murqo adag iyada oo loo marayo content dufan oo yar iyadoo la kordhinayo heerka korriin la'aan la'aan. Dhaliyarro badan ayaa loo isticmaalay Androstanolone inta lagu guda jiray shaqooyinka doping championships tan iyo walaxda ku jirta jidhka muddo gaaban oo qiimaha testosterone / epitestosterone saameyn kuma yeelan. Astaamo kale oo wanaagsan ayaa ah in qaabka laysku duro uusan ahayn sunta sunta.
Soo iibso Stanolone (DHT) budada Buyaas.com
dib u eegis 1 waayo, Budada Root Stanolone (DHT) (521-18-6)
Badeecada STANOLONE (DHT) waa mid aad u faa'iido leh.
Dufanka Masteron Enanthate (Drostanolone) budada (472-61-1)
Dufanka Drostanolone Badeecada (Masteron Propionate) budada (521-12-0)
Xashiishka Methasteron (Superdrol) budada (3381-88-2)